Toy izao no fianjeran'ilay iPhone 13 vaovao ary tohina | Vaovao IPhone
Efa nampitandrina hatrany am-boalohany isika (alohan'ny hanohizanao ny fahitana an'ity lahatsoratra ity) fa mety ho mora tohina amin'ny ankamaroanareo ireo sary ireo, saingy tsy izany na tsy izany no namoronana ireo horonan-tsary ireo hanaparitahana ireo maodely vaovao momba ny iPhone 13. Izy ireo dia horonan-tsary mampiseho antsika ny hamafin'ny mitovy ary afaka manao izany isika zahao amin'ny masontsika manokana ny fanoherana ny fikoropahana sy ny rano mitete tsy nahy.
Amin'ity tranga ity, ny horonan-tsary voalohany izay hozarainay dia manampy fampitahana amin'ny resaka fanoherana eo amin'ny iPhone 13 sy ny Samsung Galaxy S21. Tsy isalasalana fa izy ireo dia horonan-tsary izay mihoatra ny famakiana iPhone na Samsung fotsiny satria Natao hampisehoana ny tena fanoherana ireo fitaovana vaovao ireo.
Ny voalohany dia Lahatsary an'ny PhoneBuff ampitahain'izy ireo ny fanoherana mitete eo amin'ny iPhone 13 vaovao sy ny Samsung Galaxy S21 Ultra:
Ary hamita ilay horonantsary hafa an'ny youtuber fanta-daza EveryThingApplePro:
Tsy maintsy ekentsika izany ireo video roa ireo dia mety hampijaly an'ireo mpampiasa Apple sy SamsungIreo dia fitaovana miaraka amin'ny vidiny lafo ary mankarary ny mahita ny fisarahan'izy ireo amin'ny fianjerana miharihary. Etsy ankilany, tena mahaliana ny mahita amin'ireo horonantsary ireo ny fanoherana mety hananan'ny finday Apple vaovao. Ity dia zavatra iray izay naseho tamin'ny fanamafisana betsaka tamin'ny hetsika fampisehoana ary aorian'ny fijerena ireo horonantsary dia toa maharitra ihany izy ireo.
Ankehitriny isika mijery ireto horonantsary ireto, ny fitsapana faharetana ho an'ny Apple Watch Series 7, izay niavonavona be ihany koa Apple tamin'ny fampisehoana nataony. Tsy maintsy mahita ireto horonantsary ireto ianao raha misy YouTuber mamoaka azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Toy izao ny fianjeran'ilay iPhone 13 vaovao sy ny hatairany
Famakafakana ny iPhone 13 Pro Max: inona no niova tao amin'ny telefaona Apple vaovao